मधुमेहका रोगीले कस्तो फल सेवन गर्नु उपयुक्त ? – korea pati
December 22, 2020 Korea patiLeaveaComment on मधुमेहका रोगीले कस्तो फल सेवन गर्नु उपयुक्त ?
मधुमेहमा सुगर नियन्त्रण गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ । यद्यपि शरीरमा ब्लड सुगर बढ्नु र घट्नुमा अरु केही कारण हुन्छन् ।
जस्तो, तपाईंलाई टाइप २ डाइबिटिज छ भने तपाईंको इन्सुलिन सही ढंगले सुगर पच्न पाइरहेको हुँदैन । तब यो सुगर सोझै तपाईंको रगतमा पुग्छ र ब्लड सुगरको मात्रा बढ्छ ।
कस्तो फल उपयुक्त ?
July 23, 2020 Korea pati